Abalusi Abakwanti baHut Woodlands Fihla - I-Airbnb
Abalusi Abakwanti baHut Woodlands Fihla
Indlu encinci enamavili sinombuki zindwendwe onguMegan
Indlwana ethandekayo yodwa, eyenziwe ngamagcisa asekuhlaleni. Ibandakanya igumbi lokuhlambela elinesinki, ishawari, i-eco loo kunye nomzila wetawuli oshushu. Ikhitshi ene-mini butler sink, i-microwave, iketile, itoaster kunye nefriji. Ubungakanani obugcweleyo bebhedi kunye nempahla yokugcina impahla. Isifudumezi, unomathotholo kunye ne-wifi. Sibonelela ngeziseko zesidlo sakusasa; ubisi, i-cereal, isonka, ibhotolo, i-marmalade, iti kunye nekofu. Ikwaqukiwe; zonke iitawuli kunye nelinen.
I-Hut yabelusi abahle eMazantsi ePaki yeSizwe. Iimbono eziphefumlayo phezu kwechibi elizele zizilwanyana zasendle. Uninzi lokuhamba okuthandekayo kanye ukusuka kumnyango wakho. Yonwabela imbonakalo entle kunye noxolo kunye nokuzola. Ubekwe kude emahlathini, mamela izikhova ngelixa ulala.
Indlwana iyatshisa, ifanelekile njengendawo yokubaleka kamnandi nokuba injani na imozulu.
Ngoku sinendlu yesibini, Heathlands Hide, kutheni ungajongi!
Ilizwe elithandekayo lisijikeleza ngeenxa zonke kunye nokuqhuba okufutshane ukusuka kwi-South Downs Way. Sifikeleleka lula elunxwemeni eClimping & West Wittering. IGoodwood kukuhamba ngemizuzu elishumi elinesihlanu kuMnyhadala wesantya, uMvuselelo kunye nomdyarho wamahashe. I-Chichester yimizuzu engama-25 yokuqhuba kunye nekhathedrali entle kunye nethiyetha yoMnyhadala wehlabathi. IPetworth ineevenkile ezininzi zakudala kwaye iPetworth House ivulelekile kuluntu. Sikwanazo ii-pubs ezininzi ezilungileyo kwindawo ebonelela ngokutya okumnandi.
Ukuba ukhetha ukwenza okwakho ukupheka sinevenkile yasefama kwimizuzu embalwa yokuqhuba, kunye neTesco encinci yeSainbury's 10min drive kude.
Iindawo ezilungileyo zokutya, ezi zizo zonke ii-pubs:
Ihashe eliMhlophe, iSutton malunga ne-5mins ukuqhuba kude
Umkhombe kaNowa, uLurgashall
IHorse Guards Inn, eTillington
Zombini malunga ne-15 imizuzu yokuqhuba.
Imizuzu engama-20 uqhuba
Isithsaba kunye neAnchor, iDell Quay
I-Richmond Arms, i-West Ashling
Siyavuya ukunika iingcebiso ngeendawo zokundwendwela kunye nendawo yokutyela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Petworth